कम्युनिस्ट आन्दोलन संक्षिप्त सिंहावलोकन
गोरखपुर सम्मेलन र केन्द्रिय न्युक्लस गठन अघि वा पछि मोहनविक्रम र पुष्पलालबीच वास्तविक मतभेद के थियो ? यी दुई क्रान्तिकारी समुह एक हुन नसक्नुको सच्चाई के हो त ? यस सम्बन्धि अध्ययन गर्दा यी दुई समुहबीच
सत्ता स्वार्थ, गठबन्धन र अस्थिरता
जहानियाँ राणा शासनदेखि निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था भोगेका नेपालीले २०४७ सालपछि खुला बहुदलीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने मौका पाए । २०४७ सालमा जारी बहुदलीय संसदीय अभ्यासको करिब १५ वर्षसम्म अभ्यास गरेपछि मुलुकमा फेरि राजनीतिक परिवर्तन भयो ।
गत बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीय व्यवस्था अनुसार दोस्रोपटक स्थानीय सरकार गठन हुँदैछ । स्थानीय तहमा अधिकार पुगेपनि स्थानीय तह एवं सरकार अनियमितता गर्ने अखडाको रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । अपवादमा
लोकतन्त्रको खोलभित्र दलालतन्त्र
नेपालको संविधान २०७२ का अनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । तर यो तथ्य संविधानमा मात्रै सिमित छ । ब्यबहारिक रूपमा दलाल एवं नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्ती संस्कृतिको राज्यसत्ता कायम छ । यसको अर्थ नेपालमा
प्रविधि दुरुपयोग र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रश्न
काँग्रेसका एक शिर्ष नेताले गत चुनावमा आफ्नो करिब ६ करोड खर्च भएको तथ्य ओकलेपछि निर्वाचन आचारसंहिता उलंघनबारे छलफल एकाएक तात्यो । आचारसंहिता भनेको कुनै ‘नैतिक’ बन्धन मात्र होइन । खासमा आचारसंहितालाई त्यसरी मात्र लिने वा बुझ्ने प्रचलन
नयाँ वर्ष २०७९ र एक सन्दर्भ
विक्रम संम्वतको पात्रो अनुसार सौर्यमानक हिसावले बैशाख १ गतेको नयाँ वर्ष मनाउने काम गरिन्छ भने चन्द्रमानक अनुसार चैत्र शुक्लप्रतिपदा तिथिको दिनलाई नयाँ वर्ष भनिएको हो । नेपाली नयाँ वर्ष हरेक वर्षको बैशाख महिनाको एक गतेलाई मान्ने
वर्तमान परिस्थिति र नौलो जनवादी क्रान्ति
चीनको हुनान प्रान्तमा २६ डिसेम्बर १८९३ मा नेता माओत्सेतुङको जन्म भएको थियो । एउटा सामान्य निम्नमध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेका माओ चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका उत्कृष्ट नेतृत्व थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई लाइनको संघर्षमा उनले सम्पुर्ण
निर्वाचन उपयोग र कम्युनिस्ट आन्दोलन
मुलुकमा फेरि निर्वाचनको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ आगामी बैशाख ३० गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसको सम्पुर्ण प्रकारको तयारी तीब्र रुपमा गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले
कुशे सरकारलाई मेरो भन्नु छ !
हुनत उमेरले नाबालिका हुँ । मैले कुरा गर्दा ठुलो कुरा गरेको सोच्नु हुन्छ होला । धेरै भन्ने पक्षमा छैन । कुशे सरकारसंग न मेरो आग्रह छ नपुर्वाग्रह तर एक नागरीक हुनुको नाताले केहि गुनाशो छ ।
नेपालमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप र त्यसको प्रतिरोध
नेपालको रास्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजीविकामाथि यतिबेला गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। नेपालका शासकहरुको अमेरिकाभक्ति र लेन्डुपपथका कारण नेपालमाथी अमेरिकी गिद्देदृष्टि सधैं टाउकामाथिको तरबार बन्ने गरेको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हो २०६६ बाट सुरु भएको अमेरिकी